भर्जिनियाको गोलीकाण्डमा १२ जनाको मृत्यु - USNEPALNEWS.COM
भर्जिनियाको गोलीकाण्डमा १२ जनाको मृत्यु
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: June 1, 2019
अमेरिकाको भर्जिनियास्थित एउटा सरकारी भवनमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा १२ जना मारिएका छन्।
घटनामा अन्य छ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार सन्दिग्ध व्यक्ति भर्जिनिया बीच सिटीका कर्मचारी हुन् र उनले सरकारी भवनमा ‘अन्धाधुन्ध’ गोली चलाउन थालेका थिए।
गोलीकाण्डको जवाफी कारबाहीमा आक्रमणकारी पनि मारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सन्दिग्ध व्यक्तिको पहिचान खुलाइसकिएको छैन। घटनामा एकजना प्रहरी पनि घाइते भएका छन्।
घटना कसरी भयो?
भर्जिनिया बीच म्युनिसिपल सेन्टरमा स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार चार बजेपछि गोली चलेका विवरण आउन थालेका थिए।
घटना भएको क्षेत्रमा कैयौँ सरकारी भवन छन् र घटनाबारे प्रकाशमा आएपछि प्रहरीले घेरा हाली कर्मचारीहरूलाई निकालेका थिए।
गोलीकाण्ड भएको भवनमा काम गर्ने एकजना सहायक प्रशासक मेगन बान्टनले एउटा स्थानीय टेलिभिजनलाई भने, “हामीले मान्छेहरू चिच्याउँदै, कराउँदै तल झर्न भनिरहेको सुन्यौँ।”
अर्की एक कर्मचारीले समाचार संस्था एपीलाई बताए अनुसार उनीहरूले गोली चलेको सुने पनि घटना नजिकै भएको भन्ने लागेको थिएन।
शेइला कूकले भनिन्, “म ईश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई समयमै घटनाबारे जानकारी गराइयो। किनकि १० मिनेट पनि ढिलो भएको भए हामी निस्किन पाउने थिएनौँ।”
प्रहरी प्रमुख जेम्स सेर्भेराले बन्दुकधारीले प्रहरीमाथि पनि गोली चलाएपछि जवाफी प्रहारमा आक्रमणकारी मारिएको बताए।
बन्दुकधारीले एक्लै घटना गराएको प्रहरीको विश्वास छ।
पीडितबारे के थाहा छ?
अधिकारीहरूले मारिएका ११ जनाको पहिचान अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कम्तीमा छ जना घाइते भएको थाहा हुन आएको छ र त्यसमा एक प्रहरी अधिकारी पनि छन्।
घाइते प्रहरीको भेस्टमा एउटा गोली अड्किन पुगेकोले उनी बाँच्न सफल भएको प्रहरी प्रमुख जेम्स सेर्भेराले बताए।
ह्वाइट हाउसका एकजना प्रवक्ताका अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई घटनाबारे जानकारी गराइएको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार घटनास्थलमा सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईका अधिकारीहरूले स्थानीय अधिकारीहरूलाई सघाइरहेको देखिएको थियो।
भर्जिनिया बीच सिटी भर्जिनिया राज्यको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको शहर हो। त्यहाँको जनसङ्ख्या चार लाख चालीस हजार छ।
घटनाबारे प्रतिक्रिया के छ?
भर्जिनियाका सिनेटर टिम केनले घटनाबाट आफू मर्माहत भएको भन्दै ट्विटरमा लेखेका छन्।
उनले भनेका छन्, “मृतकका परिवारप्रति मेरो समवेदना छ र घटनामा घाइते भएकाहरूको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु।”
नगरप्रमुख रोबर्ट डायरले भनेका छन्, “यो भर्जिनिया बीचको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै स्तब्ध तुल्याउने दिन हो।”
भर्जिनियाका गभर्नर राल्फ नोर्थमले भर्जिनिया सिटी र राज्यकै लागि एउटा “दुखद दिन” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रदेश नं ५ स्थायी राजधानी प्रस्तावविरुद्ध – नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रदेश सभामा तोडफोड
अमेरिका विरुद्ध कुनै पनि कदम नउठाउँदा ट्रम्पले गरे पुटिनको तारिफ।
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 December 31, 2016
‘ बिहीबार पानी पर्ने सम्भावना छ’
यूस नेपाल न्युज	 April 3, 2019